Mahazo faka ny covid-19: avy eto Analamanga avokoa ny 75 amin’ireo tranga 76 | NewsMada
Mahazo faka ny covid-19: avy eto Analamanga avokoa ny 75 amin’ireo tranga 76
Niakatra hatrany ny isan’ireo nifindran’ny valanaretina ary mbola maro anisa amin’izany ny avy eto Analamanga, raha ny antontanisa navoakan’ny CCO, omaly. Miisa 76 ireo nifindran’ny valanaretina ka avy eto Antananarivo avokoa ny 75 amin’izany. Iray kosa avy any Toamasina. Ny afakomaly, miisa 49 ireo tranga vaovao ho an’ny eto Analamanga amin’ireo 60 manerana ny Nosy.
Avy eto Antananarivo ny maro amin’ireo marary mafy…
Tsy vitan’izany fa etsy Befelatanana sy Anosiala ary Andohatapenaka avokoa ny maro amin’ireo marary mafy « forme grave ». Miisa 39 izany amin’ireo 42 ahina mafy ny toe-pahasalamany, raha ny tatitra hatrany.
Na izany aza anefa, miisa 28 ireo sitrana ka 22 avy any Toamasina raha avy eto Antananarivo ny enina hafa, fanampiny.
Nahafaty olona efatra tao anatin’ny 48 ora…
Tafakatra 2 214 izany izao ireo nifindran’ny coronavirus hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty. Mbola misy 1 200 ireo tsaboina sy arahi-maso ny fahasalamany ary 994, efa hananika ny 1 000 ireo nahafeno ny fepetra fahasitranana. Miisa 21 696 kosa ny fitiliana vita hatramin’izao.
Nanamarika ity valanaretina ity koa ny nahafatesana olona miisa efatra be izao, tao anatin’ny 48 ora na roa andro nisesy taorian’ny fetim-pirenena teo. Na izany aza, mijanona ho 20 ireo namoy ny ainy.